के कारणले देखिन्छ महिलामा सेतो पानी बग्ने समस्या? यसरी पाउन सकिन्छ छुटकारा ! – News Nepali Dainik
के कारणले देखिन्छ महिलामा सेतो पानी बग्ने समस्या? यसरी पाउन सकिन्छ छुटकारा !
प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ २१, २०७७ समय: १८:१७:१३
– १ लिटर पानीमा अदुवालाई राम्रोसँग उमालेर जब पानी आधा हुन्छ त्यसपछि पिउने गर्नुपर्छ ।– गुलावको पत्तालाई सुख्खा गरेर पाउडर बनाउने गर्नुपर्छ। दैनिक दूधको साथमा यसको सेवन गर्ने गर्नुपर्छ ।
– मेथीको पानीबाट पनि संवेदनशील अंगको सफाई गर्न सकिन्छ। यसको साथमा हामी मेथीको धुलोलाई पानीमा राखेर पनि लिन सकिन्छ।– भुटेको चनालाई सख्खरको साथमा मिसेर दूध वा घिउको साथमा मिलाएर दैनिक यसको सेवन गर्न सकिन्छ।
Last Updated on: February 3rd, 2021 at 6:17 pm
६१०४ पटक हेरिएको